छक्का पञ्जा छ’ वाट मुन्द्रेलाई किन निकालियो ? – ramechhapkhabar.com
छक्का पञ्जा छ’ वाट मुन्द्रेलाई किन निकालियो ?
कलाकार जतु नेपालले होस्ट गर्ने कार्यक्रम मुन्द्रेको कमेडि क्लवको दोस्रो सिजनमा अर्की हाँस्य कलाकार दिपाश्री निरौलालाई अध्यक्षतावाट ह’टाइएको छ । दिपाश्री सो स्ट्याण्डप कार्यक्रमको पहिलो सिजनमा अध्यक्षता गर्थिन ।
तर दोस्रो सिजनमा उनको ठाउँमा नायीका करिश्मा मानन्धर आएकी छन् । दोस्रो सिजनमा दिपा नदोहोरिनुको कारण उनले राजेश हमालका बारेमा दिएको टिप्पणी र उनले सहेको आ’लोचना हो भन्ने अनुमान गरिएको थियो ।
उनले राजेशको महानायक पदवीमा प्रश्न उठाएपछि ब्यापक आलोचना सहेकी थिइन् । सामाजिक सञ्जाल मार्फत दर्शकहरुले निकै आ’लोचना गरेका कारण उनलाई निकालिएको बताईएको थियो । जितुले नै कार्यक्रममा यस अघि रहेका लट्टे नामका कलाकार पनि नदेख्दा धेरैले उनको आवश्यकता दर्शकले खोजेको स्वीकार गरेका छन् ।
उनले अब उनलाई फेरी कार्यक्रममा देख्न पाइने बताएका छन् । उनी दशैं मान्न पोखरा गएको र को’रोनाको जो’खिम पनि कायम रहेका कारण उनी कार्यक्ममा नदेखिएको बताएका छन् । उनले अबका कार्यक्रममा भने उनलाई देख्न सकिने बताएका छन् ।